W/Kuuriya oo diyaar u ah joojinta halista hubka ee gacanka 2-da Kuriya. | Puntland
W/Kuuriya oo diyaar u ah joojinta halista hubka ee gacanka 2-da Kuriya.
Hogaamiyaha W/Kuuriya Kim Jong-un ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu yareeyo ama meeshaa ka saaro halista hubka Niyuklerka,haddii K/Kuuriya iyo Mareykanka ay bixiyaan jawaab wanaagsan,sida ay ku warameen maamulka Beijing ee dalka Shiinaha.
Hogaamiyahaasi aya ballanqaaday in gacanka Kuuriya laga jooojinayo halista hubka niyuklerka,xilli uu kulankiisii ugu horeeyay uu magaalada Beijing kula qaatay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping,sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Xinhua.
Wakaaladdaasi ayaa maalinimadii shalay sheegtay iyadoo soo xiganeysa madaxweyne Jim,kaas oo tilmaamay in arimaha ku saabsan halista hubka niyuklerka la xallin karo ,haddii K/Kuuriya iyo Mareykanka ay si saaxiibtinimo uga jawaabayaan dadaalka ay waddo Pyongyang .
Madaxda Aqalka Cad ayaa sheegay in xukumadda Shiinaha ay la soo xiriireen ,isla markaana ay u sheegeen booqashada Mr Kim ee dalkooda.